Fanodinkodinam-bolam-panjakana 17 miliara Ar: migadra 15 taona, asa an-terivozona indray i Claudine | NewsMada
Fanodinkodinam-bolam-panjakana 17 miliara Ar: migadra 15 taona, asa an-terivozona indray i Claudine
Par Taratra sur 16/11/2020
Fanamelohana fanintelony avy amin’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac), 67 ha. Notanterahina ny zoma teo, nanomboka tamin’ny 3 ora tolakando ka hatramin’ny misasak’alina ny fitsarana ny mpandraharaha, Razaimamonjy Claudine. Mavesatra ny sazy ho azy.
Figadrana 15 taona, asa an-terivozona sy fandoavana lamandy 500 tapitrisa Ar.
Anisan’ny vesatra niampangana ity mpanolotsain’ny filoha teo aloha ity, miaraka amin’ny olona miisa 15 hafa ny fanodinkodinana vola amin’ny tsenam-barom-panjakana. Anisan’izany ny fanatsarana sy fanamboarana fotodrafitrasa, efitranon-tsekoly maherin’ny 30 tany Fianarantsoa, ny taona 2015-2016. Zara fa efitranon-tsekoly roa no vita nefa ny vola efa lasa. Iampangana azy ireo koa ny fanamparam-pahefana, ny kolikoly sy ny fanaovana hosoka ary firaisana tsikombakomba.
Niainga amin’ny fitarainana voarain’ny Bianco, tamin’ny fampahafantaran’ny « Recette generale Antananarivo » ny sora-bola 17 miliara Ar mahery, ny taona 2015 izany. Nitohy tamin’ny fanadihadiana.
Anisan’ny voarohirohy ireo tompon’andraikitra teo aloha, eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabezam-pirenena (Men). Anisan’izany ny tale ara-bola sy ny sekretera jeneraly. Ny nisahana ny PRMP, ny lehiben’ny fitantanam-bola (chef de service budget). Eo koa ny « chargé d’etude », teknisianina mpanara-maso, mpitam-bola (comptable), mpandraharaha (entrepreneurs) sy mpivarotra.
Fito sy 10 taona, asa an-terivozona
Tsiahivina fa efa nahazo sazy fito taona, asa an-terivozona Razaimamonjy Claudine, ny volana aogositra 2019 ary 10 taona, asa anterivozona koa ny volana desambra, tamin’io taona io koa. Fanodinkodinam-bolam-panjakana sy kolikoly avokoa ny fiampangana azy tamin’izany.